शिक्षित युवाकै मोह- देश - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २६, २०७४ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — वेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरका कृष्ण बोहरा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । वाणिज्य संकायअन्तर्गत तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनी दोस्रो पटक म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुने तयारीमा जुटेका छन् । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरु गरिएको भर्ना प्रक्रियाअन्तर्गत बुधबार आवेदन दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटअगाडि उनीजस्ता धेरै युवाको भीड बढेको छ । कोही फारम भर्नमा व्यस्त छन् । कोही लाइनलागेर आवेदन दर्ता गराउँदै छन् । कतिपय आवश्यक कागजात जुटाउन दौडिरहेका छन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला पनिम्यादी प्रहरी भएर राम्रो अनुभव बटुल्न पाइयो,’ कृष्णले भने, ‘केही आम्दानीसँगै सुरक्षाकर्मीको रूपमा काम गर्न पाइयो ।’ सुरक्षानिकायमै भर्ना हुने इच्छाका कारण उनी केही महिना पढाइ छाडेर पनि म्यादीमा भर्ना हुन लागेका हुन् । उनले असईका लागि पनि आवेदन दिएका छन् ।
सिट बाँडफाँडमा बार्गेनिङ
आश्विन २६, २०७४ अर्जुन राजवंशी
दमक — आगामी निर्वाचनका लागि प्रमुख दलले झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ लाई ‘बार्गेनिङ’ क्षेत्र बनाएका छन् । वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच उक्त क्षेत्र मान्य नहुने भन्दै बार्गेनिङ चलिरहेको छ ।
चुनावी तालमेलअन्तर्गत जिल्लामा एमालेले क्षेत्र नं. ३ माओवादी केन्द्रलाई दिन चाहिरहेको छ । तर, माओवादीले उक्त क्षेत्र स्विकारेको छैन ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने ३ नं. क्षेत्र आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पकड क्षेत्र मानिन्छ । उनले उक्त क्षेत्रबाट ६ वटा चुनाव लडिसकेका छन् । तीमध्ये दुईवटामा पराजित भएका सिटौलाले बाँकी चार चुनाव जितेका थिए । यसपटक पनि उनको नाम मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि सर्वसम्मत भइसकेको छ । गठबन्धनभित्रकै राप्रपाले पनि उक्त क्षेत्र आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पार्टी महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको नाम प्रतिनिधिसभाका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा एउटा नगरपालिका र तीन गाउँपालिका समेटिएका छन् । भद्रपुर नगरपालिकामा एमालेको नेतृत्व छ भने कचनकवल र हल्दिबारी गाउँपालिका राप्रपाले जितेको छ । बाह्रदशी गाउँपालिकामा कांग्रेसको नेतृत्व छ । कांग्रेस–एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको उक्त क्षेत्रमा दोस्रो संविधानसभा चुनावमा राप्रपाको उपस्थिति बलियो हुन पुग्यो । राप्रपाका लिङदेन एमाले उम्मेदवारलाई पछि पार्दै सिटौलाका निकटतम प्रतिस्पर्धी बने ।
यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि एमालेका पुराना नेता पुष्पराज पोखरेलको नाम सिफारिस भएको छ । माओवादी केन्द्रले नेत्री धर्मशीला चापागाईंको नाम सिफारिस गरेको छ । तालमेलअन्तर्गत जिल्लामा माओवादीले प्रतिनिधिसभाका लागि २ र प्रदेशसभातर्फ ४ वटा क्षेत्र माग गरेको छ । तर, एमाले उसलाई केन्द्रतर्फ एक र प्रदेशतर्फ दुईवटा क्षेत्र दिने योजनामा छ ।
केन्द्रतर्फ क्षेत्र नं. ३ मा माओवादी उम्मेदवारलाई सघाउन आफूहरू तयार रहेको एमालेका एक नेताले बताए । तर, माओवादीले आफूहरूको जनमत कमजोर रहेकाले उक्त क्षेत्र मान्य नहुने अडान राख्दै आएको छ । उसले क्षेत्र नं. २ र ४ मा सघाउन माग गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा कांग्रेस र राप्रपाभन्दा कमजोर रहेको एमालेले उक्त क्षेत्रबाहेक अन्यत्र दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ । ‘माओवादीलाई ३ नम्बरमै मनाउने हाम्रो प्रयास अन्तिम समयसम्म रहन्छ । मान्दै मानेन भने २ नम्बरमा कुरा मिल्न सक्ला ?,’ एक नेताले भने ।
कांग्रेस नेता सिटौलाले आफ्नो पुरानो क्षेत्रबाटै चुनाव लड्ने बताए । उनले राप्रपाले ३ नं. क्षेत्र मागे पनि आफूले छाड्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । जिल्ला सभापति उद्धव थापाले राप्रपासँग सहमतिपछि ३ नं. क्षेत्र सिटौलाले लिङदेनलाई छाडेको भनी भ्रामक समाचार आएको भन्दै आपत्ति जनाए । जिल्लामा ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा एमालेले ३ नम्बरबाहेक सबै जित्ने दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसको ५ नम्बरबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा जित हासिल गर्ने दाबी छ । राप्रपाको ३ नम्बरबाहेक अन्य क्षेत्रमा बलियो आधार देखिँदैन ।
टिकटका लागि राजधानी
डोल्पाबाट पार्टी केन्द्रमा नाम सिफारिस भएपछि नेता–कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा उम्मेदवारी पार्न भनसुनका लागि राजधानी गएका छन् । प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारमा सर्वसम्मत नाम आए पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभामा थुप्रै नाम सिफारिस गरेका छन् ।
एमाले जिल्ला अध्यक्ष दत्तबहादुर रोकाया, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हंसबहादुर शाही, प्रदेश कमिटी सदस्य बद्मी बोहरा, जिल्ला कमिटी सचिव नन्दसिंह बुढा, सचिवालय सदस्य छक्कबहादुर धराला र जिल्ला कमिटी सदस्य लंकबहादुर शाही प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको टिकट लिन दौडधुपमा छन् । माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष मालबहादुर रोकाया, नैनप्रसाद पहाडी, वीरबहादुर शाहीलगायत नेता पनि राजधानीमै छन् । कांग्रेस जिल्ला सभापति अंगदकुमार बुढा, पूर्वसभासद दूधकुमारी हमाल, पूर्वसभापति टंकप्रसाद उपाध्याय, कर्णबहादुर रोकाया, बेगमसिंह ठकुरीलगायत नेता भनसुनका लागि केन्द्र पुगिसकेका छन् ।